आज विश्वभर भ्रमण वर्षको शूभारम्भ, अष्ट्रेलियाको कार्यक्रम किन विवादित ? - Vishwa News
आज विश्वभर भ्रमण वर्षको शूभारम्भ, अष्ट्रेलियाको कार्यक्रम किन विवादित ?
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को मंगलबार विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी उद्घाटन गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ, सम्बन्धित मुलुकका नेपाली कूटनीतिक नियोग र सरोकारवालाको सहभागितामा संसारभर भ्रमण वर्षको उद्घाटन गरिएको भ्रमण वर्षको सचिवालयले जनाएको छ ।
१ जनवरीमा नेपालमा उद्घाटन गरिएको यस कार्यक्रमलाई विदेशमा भने ७ जनवरीमा उद्घाटन गरिएको हो ।
सोही सिलसिलामा अष्ट्रेलियामा भएको उद्घाटन कार्यक्रमको भने विवादित प्रचार भएको छ ।
किनकी यहाँ स्वयमः पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पुगेका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र न्यू साउथ वेल्स राज्य संसदका सभामुख जोनाथन ओ डीले संयुक्त रुपमा सिड्नीको सर्कुलर क्युवेमा आयोजित एक कार्यक्रममा भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गरेका छन् ।
त्यसअघि सिड्नीका विभिन्न स्थानबाट नेपालीहरु सास्कृतिक पहिरनसहित सर्कुलर क्युवेमा आइपुगेका थिए ।
त्यसक्रममा नेपालीले डढेलो पीडितका लागि सहयोग जुटाउने अवसरका रुपमा स्याल्भेसन आर्मीका चन्दा बाल्टिन बोकेको पर्यटन मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । नेपाली स्वयमसेवकले जीवजन्तुका लागि सहयोग संकलन गरेका थिए ।
औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि पर्यटनमन्त्री भट्टराईसहित सहभागी ओपेरा हाउस भ्रमणमा पुगेका थिए ।
त्यसक्रममा नेपाल र अस्ट्रेलियाको झण्डासमेत बोकेका करिब दुई सय मानिस ओपेरा हाउस नजिकै पुग्दा सुरक्षागार्डहरुले रोकेको घटनालाई भने नेपालमा बढाई चढाई गरेर छापिएपछि त्यसले अष्ट्रेलियाको कार्यक्रमलाई भने विवादित बनाएको छ । प्र
दर्शन जस्तो देखिने यस्ता कार्यक्रमले पर्यटकहरुलाई असुविधा पुग्ने भएकाले सुरक्षागार्डले चासो राखेका भन्दै नियोजित रुपमा आफ्नो वेइज्यत गर्न खोज्ने समूहले हल्ला चलाउँदा मुलुककै बेइज्यत भएको पर्यटन मन्त्री भट्टराईले स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा घोषणा गरेको हो ।
उहान ल्याबकी डाईरेक्टर भन्छिन्; ल्याबमा तीन प्रकारका जीवित कोरोना भाइरस छन (भिडियो अन्तर्वार्ता)
अमेरिकामा कोरोना संक्रमित ६ लाख माथि
बझाङ पहिरो: ६ जनाको शव फेला, उद्दारमा गएको सेनाको गाडी दुर्घटनामा